NL (ခ) ဒီအမောင်: 10/16/13
( I can not fly )
အခုတော့ အားလုံး ..
ဘ၀မှာ .. မျှော်လင့်ချက်ဆိုတဲ့ ..
အရှေ့က ပန်းတိုင်ကို .. မျှော်လင့်ရင်း..
အသက်ရှင်နေရတာ အပြစ်လား ..
ငါအများကြီး တောင်းတဘူးတဲ့ ..
အိမ်မက်တွေ ..အခု .. ရပ်တန့်နေပါပြီ ..
Posted by nllamin.com at 10:36 PM
◄ ချစ်စရာ .. ဓလေ့တစ်ခုပါ .. ►
တစ်ချို့က မာနကြီး .. လက်သီးဆိုပဲ ..
တစ်ချို့က .. မသိချင်ယောင်ဆောင် .. ခြင်ထောင် ထောင်တက်ကြတယ်..
တွေ့လို့ နှုတ်ဆက်.. မင်းတော်တော် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေလားတဲ့..
ဟော် .. ကိုယ်ပဲ မှားပါတယ်...
ခင်မင်မှုရှိတဲ့ လူတွေကို တွေ့ရင် ..
နှုတ်ဆက်တက်ကြတယ်.. မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ချစ်စရာ ..ဓလေ့တစ်ခုပဲ ..
အကျွမ်းတ၀င်ရှိတဲ့ သူတွေကို မြင်ရင်
နှုတ်ဆက်တက်ကြတာ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ချစ်စရာ ..ဓလေ့လေး တစ်ခုပါကွာ..။
Posted by nllamin.com at 10:30 PM
◄ ဒီစကားလေးတစ်ခွန်း Promise ►
တကယ်ကို အထင်ကြီးလုပ်ပြီး ..
Promise တွေ ပေးခဲ့တယ်..
ဒါကို ငါက ရှေ့နေကြီးတစ်ယောက်လို ..
အရာအရာ ဖြေရှင်းပေးနိုင်တယ် ထင်ခဲ့လို့..
လက်တွေ့က ခက်ခဲတယ်ဆိုတာ ..
ငါကြုံမှ သိလိုက်တာလား ..
ကိုယ့်ကိုယ်ကို အဟုတ်ကြီး ထင်လိုက်တာ ..
အမှားတွေ အထပ်ထပ် ပုံရိပ်တွေ အခုဖြစ်လာတယ်..
Posted by nllamin.com at 10:25 PM
(ငါသိလိုက်တဲ့ ◄ ခဲတံ နှင့် ဘော်ပင် ►)
စာသင်ကျောင်းအရွယ်လေးရောက်တော့ . ..
ခဲတံလေးတွေကို အမြဲတမ်း ကိုင်ထားရတယ်..
အမြဲတမ်းလဲ .. ကုန်သွားလိုက် ၀ယ်လိုက်နဲ့ပေါ့ ..
ဘာမှ မသိသေးတဲ့အချိန်တွေဆိုတော့ ..
အမှားတွေလုပ်တက်လို့ .. ခဲဖျက်လေးနဲ့
ပြင်လိုက် အမှန်ရေးလိုက် ..
ဖျက်လိုက် အမှန်ရေးလိုက် .. ပေါ့ ..
Posted by nllamin.com at 10:23 PM
◄ သိစေဖို့ ►
အခုဆိုတဲ့အချိန်ဟာ ဘယ်တော့မှ ပျောက်မသွားဘူး
သူ့နေရာမှာသူ အမြဲရှိနေတယ်.. ။ ဒါကြောင့် အခု စိတ်ချမ်းသာအောင်နေနိုင်မှ
ကိုယ့်ဘ၀မှာ ဘာအခက်အခဲ ဘာပြဿနာမှမရှိရင် ကောင်းမှာပဲလို့
မျှော်လင့်နေရင် ဘယ်တော့မှ စိတ်ချမ်းသာမှာ မဟုတ်တော့ဘူး ..။
အရေးကြီးတာက ပြဿနာမရှိဖို့ မဟုတ်ဘူး..။
ပြဿနာကို အကောင်းဆုံးနည်းနဲ့ ဖြေရှင်းဖို့..။
ငါဟာ လွတ်လပ်တဲ့သူလို့ ပြောချင်ရင် ငါ့စိတ်ချမ်းသာမှုဟာ
ငါ့လက်ထဲမှာ ရှိတယ်လို့ ပြောနိုင်မှ ရမယ်..။ စိတ်မချမ်းသာသေးဘူးဆိုရင်
ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ စိတ်ချမ်းသာမှုကို ရှာတွေ့ဖို့ မလွယ်ဘူး .. ဆိုပေမယ့်..
တစ်ခြားနေရာမှာ ရှာတွေ့ဖို့ကတော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ..။
ကိုးကားဖတ်ရှုသမျှ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်.. လေးစားလျက်
Posted by nllamin.com at 10:21 PM
◄ သိစေဖို့ (2)►
ခန့်မှန်းချင်ရင် အကောင်းဆုံးအချက်က ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လောက်
ကျေနပ်သလဲ ဆိုတဲ့ အချက်က အကောင်းဆုံးပဲ .. ။
မိသားစုဘ၀က အကောင်းဆုံးအချက် မဟုတ်ဘူး ..။
မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်းက အကောင်းဆုံးအချက် မဟုတ်ဘူး ..။
၀င်ငွေက အကောင်းဆုံးအချက် မဟုတ်ဘူး ..။
အဲဒါကို ကြည့်ရင် တစ်ခြားအချက်တွေ ဘယ်လောက်ပဲ ..
ပြည့်စုံနေပါစေ.. ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကိုယ် မကျေနပ်တဲ့သူ အားမရတဲ့သူက ..
စိတ်ချမ်းသာမှု ပြည့်ပြည့်၀၀ မရနိုင်ဘူး ..။
ကိုယ်နဲအမြဲတန်းရှိနေတာ ကိုယ်ပဲ..။ ဘယ်သွားသွား အမြဲ ကိုယ်နဲ့ ပါနေတယ်..။
Posted by nllamin.com at 10:20 PM
Posted by nllamin.com at 10:18 PM
◄သိစေဖို့ (3) ►
ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ်တည့်တည့်ကြည်ထားတတ်မှ ကိုယ့်စိတ်အကြောင်းကို ကိုယ်နားလည်မယ်။
လူ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူမှသာ စစ်မှန်တဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကို ရနိုင်တယ်။ကိုယ်ကျင့်တရား
ကောင်းတဲ့သူဟာ စိတ်ပိုချမ်းသာတယ်။ ကိုယ်ချင်းစာတတ်တဲ့သူ၊ကူညီတတ်တဲ့သူ၊ ရိုးသားတဲ့သူဟာစိတ်ပို ချမ်းသာတယ်။
Posted by nllamin.com at 10:14 PM
(ကောင်းလိုရာလေးများ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါသည်) လေးစားလျက်
လွန်ခဲ့သောကမ္ဘာတစ်သိန်းအထက်က ပဒုမုတ္တရဘုရားရှင် ခေမာမိဂဒါဥယျာဉ်၌ သီတင်းသုံးနေစဉ် ဝေဒေဟသူဌေးကြီးနှင့် ဇနီးတို့ ခဲဖွယ်ဘောဇဉ်များကို လှူဒါန်းကာ ဥပုသ်သီလဆောက်တည်၍ ဘုရားရှင်နှင့်တကွ သံဃာတော်ခြောက်သောင်းတို့အား ဆွမ်းဘုန်းပေးကြွရောက်ရန် အိမ်သို့ပင့်ဖိတ်ပြီး ပြန်ခဲ့လေသည်။ ထိုကဲ့သို့ ခုနှစ်ရက်တိုင်အောင်ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပြီး ပဒုမုတ္တရဘုရားရှင်၏ ခြေတော်အစုံကို ဦးတိုက်၍ မိမိအလိုရှိသော ဆု.... “ဤသို့ ခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးပြုလုပ်ခဲ့သော ကုသိုလ်စေတနာကြောင့် အရှင်နိသဘမထေရ်ကဲ့သို့ ဓုတဓရ ဧတဒဂ္ဂ တတိယသာဝကဘွဲ့ထူး များကို ချီးကျူးမြှောက်စား တော်မူပါဘုရား” ဟု လျှောက်ထားတောင်းပန်လိုက်သည်။ ထိုအခါ ပဒုမုတ္တရဘုရားရှင်သည် ဝေဒေဟသူဌေးကြီး၏ သဒ္ဓါတရားကို စောင့်ရှောက်သောအားဖြင့်.... “ဝေဒေဟသူဌေးကြီး.... ဤကမ္ဘာမှနောက်ကမ္ဘာတစ်သိန်းမြောက် ဘဒကမ္ဘာ၌ ဂေါတမဘုရား ပွင့်တော်မူလတ္တံ့၊ ထိုအခါ သင်သည် ဂေါတမ ဘုရား၏ သာသနာတော်၌ မဟာကဿပမည်တော်ရ၍ ဓုတဓရ ဧတဒဂ်ရ တတိယသာဝကကြီး ဖြစ်လိမ့်မည်” ဟု ဗျာဒိတ်စကား မိန့်ကြားလိုက်သည်။
ထိုသုိ့ဗျာဒိတ်တော်ရအပြီး နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ၊ မေတ်္တာတရားများပွားများ၍ အသက်အတိုင်းနေပြီး စုတေသောအခါ နတ်ပြည်၊ လူ့ပြည် လှည့်လည်ကာ ဖြစ်ကြလေသည်။
(၁) ကိုးဆယ့်တစ်ကမ်္ဘာလွန် ၀ိပဿီဘုရားလက်ထက်၌ ဧကသာဋကပုဏ္ဏား အဖြစ်
(၃) ကဿပဘုရားလက်ထက်တွင် ကုဋေ(၈၀)ကြွယ်ဝသော သူဌေးကြီးအဖြစ်
(၄) ဗာရာဏသီပြည်၌ နန်္ဒိယမင်းကြီး အဖြစ်
(၅) ဂေါတမဘုရားထင်ရှားဖြစ်လာသောအခါ မာဂတိုင်း၌ ကဿပနွယ်ဖြစ်သော မင်းပုဏ္ဏား၏သားငယ် ပိပ္ပလိ အဖြစ် ဖွားမြင်ခဲ့သည်။ အရွယ်ရောက်သောအခါ မန္ဒရာဇ်တိုင်း သာဂလမြို့မှ ဘဒ္ဒကာပိလာနီ နှင့် မိဘတို့၏သဘောအတိုင်း အိမ်ရာထူထောင်ခဲ့သည်။
မိဘနှစ်ပါးဆုံးပါးသွားပြီးနောက် တနေ့သ၌ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးစလုံးသည် “ရဟန်းပြုအံ့၊ ရဟန်းမ ပြုအံ့”ဟု အကြံရလျှက် ရှိသမျှ စည်းစိမ်ဥစ်္စာအားလုံး ကိုစွန့်လွတ်၍ တစ်ဦးကိုတစ်ဦးဆံချပေးပြီး ဖန်ရည်စွန်းသောသင်္ကန်းကိုဝတ်ရုံ၍ တောထွက်ကြလေသည်။ ထိုသို့ တောထွက်လာကြပြီးနောက် တောမြိုင်တခု၌ လမ်းဆုံတခုတွေ့ရာ ပိပ္ပလိက လက်ယာဘက်လမ်း မယ်ဘဒ္ဒါက လက်ဝဲလမ်းကိုလိုက်၍ ခွဲခွာလိုက်ကြသည် ထိုခွဲခွာပြီးသည်နှင့် တပြိုင်နက် မြေပြင်သည်ပဲ့တင်တုန်ဟီး၍ ကောင်းချီးပေးခဲ့သည်။
Posted by nllamin.com at 10:12 PM